Ndi an-kpọ aha - Ndi rere ahia
Ọhụrụ, pere mpe mbipụta "Trilogie d'Exception"ikpe na-agba ọbụbụenyi dị n'etiti aha atọ dị mkpa na Bordeaux site na mmanya atọ dị oke mkpa. Chateaux Figeac, Leoville Las ole ahụ na Palmer gosiputa akuko ha na omuma ha site na okwu a di ebube, nke na-achikota obughi nani mmanya ato ato, kamakwa okpukpu ato nke ochie.
Ngosipụta nke ịdị mma nke nnukwu ala ndị a na nke ebighi ebi nke oke egwu ha, emepụtara ikpe a na oke pere mpe, na-ewepụta naanị otu narị na ise nke ụdị ọkọlọtọ ọkọlọtọ na mkpụrụ akwụkwọ 1,500 nke ụdị karama magnum ahụ. Ikpe ahụ na-eme ka Chateau Leoville Las Cases 330 mara mma, Chateau Palmer 2000, na Chateau Figeac 2005, na-enye nkọwa dị mma banyere ụkpụrụ nke ihe atọ ndị a na-akọrọ: agụụ, ọdịnala na ụkpụrụ ezinụlọ.
Onye ọ bụla «La Trilogie d'Exception» case include:
- 1 karama nke Chateau Leoville Las Cases 2000 si Chateau Leoville Las ole.
Ọnọdụ ihu igwe dị mma nke mkpụrụ vaịn a na-enye ohere maka owuwe ihe ubi nke mkpụrụ vaịn zuru oke na nke ọma. Nsonaazụ bụ mmanya dị ụtọ na mkpụrụ osisi. Ya zuru okè Ọdịdị gbatịrị ruo ogologo, ọnụ mmiri n'isi.
- 1 karama nke Chateau Palmer 2005 si Chateau Palmer.
Vintint nke afọ 2005 na-atọ ụtọ, ọbụna na-agbagha. N'ezie, ọ gaghị ada ada, ọbụna mgbe ọtụtụ iri afọ gasịrị, inye nnukwu obi ụtọ. Kpọmkwem, ọgaranya na kpụ ọkụ n'ọnụ, mmanya a na-enye nkwekọ.
- 1 karama nke Chateau Figeac 2010 si Chateau Figeac.
A pụrụ ịkọwa vintage 2010 dị ka ihe pụrụ iche na Bordeaux n'ozuzu, yana na Chateau Figeac ọkachasị. Mara mma ma dị mgbagwoju anya, mmanya a dị ezigbo mma, ma juputara na mma na ọtụtụ mmadụ. Nke a bụ ọkwa dị elu Premier Cru Classe.
A na-akpọ ndị hụrụ mmanya n'anya na ndị nchịkọta ume ka ha (chọpụta), site na ụzọ atọ ndị a na-enweghị atụ, quintessence na mmụọ nke atọ dị ukwuu Bordeaux zoro aka.